Soo bandhigida Hub Volunteer, oo ah goob tabaruc online ah - Cunnooyinka ku socda Wheels
Soo bandhigida Tabaruca Hub, oo ah barnaamij iskaa wax u qabso ah oo internetka ah
Volunteer Hub waa barxad internetka ah oo ka dhigi doonta iskaa wax u qabso Meals on Wheels fudeyd iyo fudeyd badan! Iyada oo loo marayo astaantan cusub, tabaruceyaashu waxay jadwal u sameyn karaan is-beddelka iskaa-wax-u-qabso iyo dhammaystirka tababbarka mutadawiciinta ee khadka tooska ah.
Iyada oo leh 32 Meals on Wheels goobaha bixinta cuntada ee magaalooyinka Twin Cities, hadafka Volunteer Hub waa in loo oggolaado tabaruceyaasha inay arkaan isbeddelada laga heli karo xaafadaha kala duwan. Waxaad ka raadin kartaa jidadka la heli karo goobta ama taariikhda.
Gunno kale oo ah Tabaruce Hub waa in aad jadwal u sameysato shaqadaada wakhti kasta, oo ku habboon, adiga oo aan u dirin emayl ama wicitaan taleefan. Tabaruceyaashu waxay sidoo kale heli doonaan tababar daboolaya aasaaska bixinta cuntada waxayna kaa caawin doontaa inaad dareento raaxo markaad isqorto dariiqa koowaad.
Haddii aad tahay cunug iskaa wax u qabso ku shaqeeya oo Wheels ah oo xiiseynaya inuu arko waxa Volunteer Hub uu bixinayo, fiiri si loo arko waddooyinka laga heli karaa xaafadaada. Haddii aadan waligaa cunto keenin, laakiin aad jeceshahay, buuxi foomkeena isdiiwaangelinta iskaa wax u qabso ah.
Ogast 12, 2016